परमेश्वरको राज्यले कहिलेदेखि शासन गर्न थाल्यो? | छिमेकीसित कुराकानी (भाग १)
प्रहरीधरहरा | अक्टोबर २०१४
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन मराठी मले मल्यालम माया मालागासी म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
परमेश्वरको राज्यले कहिलेदेखि शासन गर्न थाल्यो? (भाग १)
एक जना यहोवाको साक्षी र छिमेकीबीच हुन सक्ने कुराकानी तल दिइएको छ। प्रकाश भन्ने मान्छेसित गगन नाम गरेका एक जना यहोवाका साक्षीले यो कुराकानी गरिरहेको कल्पना गरौं।
गगन: प्रकाशजी, तपाईंसित बाइबलबाट नियमित रूपमा छलफल गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। * अस्ति तपाईंले परमेश्वरको राज्यबारे एउटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो, यहोवाका साक्षीहरू परमेश्वरको राज्यले सन्‌ १९१४ देखि शासन गर्न थाल्यो भनी किन विश्वास गर्छन्‌ भनेर। तपाईंलाई याद छ कि?
प्रकाश: छ नि। मैले तपाईंहरूको एउटा प्रकाशन पढ्दै थिएँ र त्यसमा परमेश्वरको राज्यले सन्‌ १९१४ देखि शासन गर्न थाल्यो भनेर लेखिएको थियो। यो विषयमा मलाई खुलदुली लाग्यो किनभने तपाईंहरूले विश्वास गर्ने सबै कुराहरू बाइबलआधारित छ भनेर तपाईंले भन्नुभएको थियो।
गगन: हो, तपाईंले सही भन्नुभयो।
प्रकाश: मैले पूरै बाइबल पढिसकें। तर कुनै पनि बाइबल पदमा सन्‌ १९१४ उल्लेख गरेको मलाई याद भएन। त्यसैले मैले इन्टरनेटको अनलाइन बाइबलमा गएर “१९१४” टाइप गरेर खोजें। तर त्यहाँ पनि सन्‌ १९१४ लेखिएको कुनै बाइबल पद भेटिएन।
गगन: ओहो! म दुईवटा कुराको लागि तपाईंको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। पहिलो त तपाईंले पूरै बाइबल पढिसक्नुभएको रहेछ। तपाईंलाई परमेश्वरको वचन साँच्चै मनपर्छ जस्तो छ।
प्रकाश: हो, मलाई धेरै मनपर्छ। बाइबल जस्तो त अरू कुनै किताब छैन भन्ने मलाई लाग्छ।
गगन: म पनि तपाईंको यो कुरामा सहमत छु। अनि तपाईंको प्रशंसा गर्न मन लागेको दोस्रो कारण चाहिं तपाईंले आफ्नो प्रश्नको जवाफ बाइबलमा नै भेट्टाउने कोसिस गर्नुभयो। बाइबलले पनि हामीलाई विवेक ‘खोजिरह’ * भनेर आग्रह गरेको छ। तपाईंले ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नुभयो। यो धेरै राम्रो कुरा हो।
प्रकाश: धन्यवाद। मलाई अझ धेरै कुरा सिक्न मन छ। साँच्चै भन्नुपर्दा मैले यस विषयमा अझ अनुसन्धान गरें अनि हामीले अध्ययन गर्दै गरेको किताबमा सन्‌ १९१४ बारे केही जानकारी पाएँ। एक जना राजाले सपनामा एउटा बडेमाको रूख ढालिएको देख्छ र पछि फेरि त्यो रूख बढ्छ। त्यो किताबमा यस्तै केही लेखिएको थियो।
गगन: हो। यो सपना बेबिलोनका राजा नबूकदनेसरले देखेका थिए र यो दानियल अध्याय ४ मा पाइने भविष्यवाणीको एउटा भाग हो।
प्रकाश: अँ, मैले पढेको कुरा पनि त्यही हो। त्यो भविष्यवाणी दोहऱ्याइ-तेहऱ्याइ पढें तर परमेश्वरको राज्य र सन्‌ १९१४ सित त्यो भविष्यवाणी कसरी सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नै सकिनँ।
गगन: प्रकाशजी, साँच्चै भन्ने हो भने त्यो भविष्यवाणी लेखेका भविष्यवक्ता दानियलले समेत त्यसको अर्थ राम्ररी बुझ्न सकेका थिएनन्‌!
प्रकाश: ए, हो र?
गगन: हो नि। दानियल १२:८ मा तिनले यस्तो लेखे: “मैले सुन्न ता सुनें तर बुझ्नसकिनँ।”
प्रकाश: ए, त्यसोभए त्यो भविष्यवाणी नबुझ्ने म मात्रै त होइन रहेछ। बल्ल ढुक्क भएँ।
गगन: सत्य कुरा के हो भने त्यतिखेर दानियलले त्यो भविष्यवाणी नबुझ्नुको कारण थियो। त्यसबेलासम्म मानिसहरूले दानियलको किताबका भविष्यवाणीहरूमा भएको एक-एक कुराको अर्थ बुझ्ने परमेश्वरको समय आएको थिएन। तर आज हाम्रो समयमा भने हामी ती कुराहरू अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं।
प्रकाश: यसो भन्न सक्ने कुनै कारण छ त?
गगन: त्यसपछिको पदमा हेर्नुस् न। दानियल १२:९ मा यस्तो लेखिएको छ: “यी वचन गुप्त राखिएका छन्‌, औ अन्तको समयसम्मलाई बन्द गरिएका छन्‌।” यस पदअनुसार दानियलको किताबमा भएका भविष्यवाणीहरू धेरै पछि अर्थात्‌ ‘अन्तको समयमा’ मात्र मानिसहरूले बुझ्ने थिए। हामी अन्तको समयमा बाँचिरहेका छौं भन्ने कुराको थुप्रै प्रमाण छ र बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदा चाँडै हामी यो कुरा पनि सिक्नेछौं। *
प्रकाश: गगनजी, त्यसोभए तपाईं मलाई दानियलको भविष्यवाणी बुझाउन सक्नुहुन्छ त?
गगन: म कोसिस गर्छु।
गगन: सबैभन्दा पहिला राजा नबूकदनेसरले देखेको सपना छोटकरीमा बताउँछु अनि त्यसपछि त्यो सपनाको अर्थबारे कुरा गरौंला नि, हुन्न?
प्रकाश: भइहाल्छ नि।
गगन: राजा नबूकदनेसरले आफ्नो सपनामा एउटा बडेमाको रूख बढेर आकाशसम्मै पुगेको देखे। त्यसपछि परमेश्वरका दूतले त्यस रूखलाई काट्ने आदेश दिएको तिनले सुने। तर परमेश्वरले त्यस रूखको ठुटाचाहिं जरैसमेत जमीनमा बाँकी राख्न निर्देशन दिनुभयो। “सात काल” बितिसकेपछि त्यो रूख फेरि बढ्ने थियो। * यो भविष्यवाणी पहिले त राजा नबूकदनेसरको सन्दर्भमा पूरा भयो। तिनी शक्तिशाली राजा थिए। तैपनि आकाशसम्मै पुग्ने रूखलाई काटिएजस्तै ‘सात कालको’ लागि तिनको शासन रोकियो। त्यसबेला के भएको थियो, तपाईंलाई याद छ?
प्रकाश: अहँ, याद छैन।
गगन: ठीकै छ। बाइबलअनुसार नबूकदनेसरले सात काल अर्थात्‌ सात वर्षसम्म मानसिक सन्तुलन गुमाए। त्यो समयमा तिनले राजाको रूपमा शासन गर्न सकेनन्‌। तर सात कालको अन्तमा भने तिनको मानसिक सन्तुलन राम्रो भयो र तिनले फेरि राजाको रूपमा शासन गर्न थाले। *
प्रकाश: म अहिलेसम्म तपाईंको कुरा बुझ्दैछु। तर यो कुरासित परमेश्वरको राज्य र सन्‌ १९१४ कसरी सम्बन्धित छ त?
गगन: छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो भविष्यवाणीको दुइटा पूर्ति छ। राजा नबूकदनेसरको शासन रोकिंदा पहिलो पूर्ति भयो भने दोस्रो चाहिं परमेश्वरको शासन रोकिंदा यो भविष्यवाणी पूरा भयो। त्यसैले भविष्यवाणीको दोस्रो पूर्ति चाहिं परमेश्वरको राज्यसित सम्बन्धित छ।
प्रकाश: दोस्रो पूर्ति परमेश्वरको राज्यसित सम्बन्धित छ भनेर तपाईंलाई कसरी थाह भयो त?
गगन: पहिलो त भविष्यवाणी आफैले त्यस कुराको सङ्केत दिन्छ। दानियल ४:१७ (NRV) मा भविष्यवाणी लेखिनुको कारण यसरी बताइएको छ: “जीवित प्राणीहरूले जानून्‌ कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ, र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ।” के तपाईंले यहाँ “मानिसहरूको राज्य” भन्ने शब्दलाई याद गर्नुभयो?
प्रकाश: हजुर, यहाँ “मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ” भनी बताइएको छ।
गगन: सही भन्नुभयो। यहाँ बताइएको “सर्वोच्च” को हुन सक्छ त?
प्रकाश: परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जस्तो छ।
गगन: एकदम ठीक जवाफ दिनुभयो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो भविष्यवाणी नबूकदनेसर राजाको विषयमा मात्र त थिएन। बरु यस भविष्यवाणीले “मानिसहरूको राज्य” अर्थात्‌ मानिसजातिमाथि परमेश्वरको शासनबारे पनि चर्चा गरेको छ। अनि हामीले भविष्यवाणीको प्रसङ्ग विचार गऱ्यौं भने यो कुरा अझ स्पष्टसित बुझ्न सक्छौं।
किताबको मूल विषय
गगन: दानियलको किताबले बारम्बार एउटा मूल विषयलाई जोड दिएको छ। त्यो हो, परमेश्वरको छोरा येशूको शासनअन्तर्गत परमेश्वरको राज्य स्थापित हुने। उदाहरणको लागि दानियल किताबको अघिल्ला अध्यायहरूमा हेरौं न। तपाईं दानियल २:४४ पढ्न सक्नुहुन्छ?
प्रकाश: हुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ: “ती राजाहरूका समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जो कहिल्यै नाश हुनेछैन, नता त्यसको राज्य अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। त्यसले यी सबै राज्यहरूलाई चक्नाचूर पार्नेछ, र तिनीहरूको अन्त गरिदिनेछ। तर यो राज्यचाहिं सदासर्वदै रहिरहनेछ।”
गगन: धन्यवाद। यो बाइबल पदले परमेश्वरको राज्यबारे कुरा गर्दै छ जस्तो के तपाईंलाई लाग्छ?
प्रकाश: अँ . . . म पक्का त भन्न सक्दिनँ।
गगन: हेर्नुस् त, यस पदमा यो राज्य “सदासर्वदै रहिरहनेछ” भनी बताइएको छ। सदा सर्वदै रहने राज्य त परमेश्वरको मात्रै हुन सक्छ नि, होइन र? के मानिसहरूको सरकार पनि सधैंको लागि रहन सक्छ र?
प्रकाश: अहँ, सक्दैन।
गगन: यहाँ दानियलको किताबको अर्को एउटा भविष्यवाणीले पनि परमेश्वरको राज्यबारे बताएको छ, हेर्नुस् त। दानियल ७:१३, १४ मा पाइने यो भविष्यवाणीमा एक जना शासकको विषयमा यस्तो लेखिएको छ: “विभिन्न भाषा बोल्ने सबै जातिका मानिसहरूले उहाँको सेवा गरून्‌ भनेर उहाँलाई सर्वाधिकार, महिमा र राज्याधिकार दिइयो। उहाँको सर्वाधिकार कहिल्यै नबित्ने सदासर्वदैको सर्वाधिकार छ, औ उहाँको राज्याधिकार कहिल्यै नष्ट हुनेछैन।” यो भविष्यवाणीमा अहिले हामीले कुरा गरिरहेकै विषयसित सम्बन्धित एउटा शब्द याद गर्नुभयो?
प्रकाश: यसमा पनि राज्यको विषयमा बताइएको रहेछ।
गगन: ठीक भन्नुभयो। तर यो एउटा विशेष राज्य हो। यस पदमा हेर्नुभयो भने ‘विभिन्न भाषा बोल्ने सबै जातिका मानिसहरूमाथि’ यस राज्यको अधिकार छ भनेर बताइएको छ। यसको अर्थ यस राज्यले पूरै पृथ्वीमा शासन गर्नेछ।
प्रकाश: यो पदको अर्थ यस्तो होला भनेर त मैले सोचेकै थिइनँ तर तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो।
गगन: भविष्यवाणीमा अझै के लेखिएको छ, हेर्नुस् त: “उहाँको सर्वाधिकार कहिल्यै नबित्ने सदासर्वदैको सर्वाधिकार छ, औ उहाँको राज्याधिकार कहिल्यै नष्ट हुनेछैन।” यी शब्दहरू हामीले अघि पढेको दानियल २:४४ का शब्दहरूसित मिल्दोजुल्दो छैन र?
प्रकाश: हो, उस्तै-उस्तै छ।
गगन: अब हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेको कुरा छोटकरीमा दोहोऱ्याऔं है। दानियल अध्याय ४ को भविष्यवाणी दिनुको कारण “मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ” भन्ने कुरा मानिसहरूले जानून्‌ भन्ने थियो। यी शब्दहरूले नै यो भविष्यवाणी नबूकदनेसरको सन्दर्भमा मात्र पूरा हुने होइन, यस भविष्यवाणीको अझै ठूलो पूर्ति पनि छ भनेर देखाउँछ। अनि त्यति मात्र नभई दानियलको किताबभरि नै परमेश्वरको राज्य स्थापित हुनेछ र त्यस राज्यमा उहाँको छोराले शासन गर्नेछ भनेर थुप्रै भविष्यवाणी गरिएको पाउँछौं। त्यसोभए दानियल अध्याय ४ मा भएको भविष्यवाणी पनि परमेश्वरको राज्यसितै सम्बन्धित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु ठीक छैन होला त?
प्रकाश: अँ, ठीक छ। तर अझै पनि सन्‌ १९१४ सित यसको के सम्बन्ध छ भनेर मैले बुझिनँ।
“सात काल नबितुञ्जेल”
गगन: अब हामी फेरि राजा नबूकदनेसरबारे कुरा गरौं। भविष्यवाणीमा रूखले तिनलाई चित्रण गर्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई याद छ होला। रूख काटेर ढालिएपछि तिनको शासन सात कालको लागि रोकियो। यो समयमा तिनले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाएका थिए। राजा नबूकदनेसरको मानसिक सन्तुलन ठीक भएपछि र तिनले फेरि शासन गर्न थालेपछि सात कालको अन्त भयो। भविष्यवाणीको दोस्रो पूर्तिमा पनि केही समयका लागि परमेश्वरको शासन रोकिने थियो तर उहाँमा त्रुटि भएकोले त होइन।
गगन: पुरातन समयमा यरूशलेममा शासन गर्ने इस्राएली राजाहरू “परमप्रभुको सिंहासनमा” * विराजमान हुन्छन्‌ भनिएको थियो। परमेश्वरका जनहरूमाथि शासन गर्दा ती राजाहरूले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्थे। त्यसैले ती राजाहरूको शासनले नै वास्तवमा परमेश्वरको शासनलाई चित्रण गर्थ्यो। तर समय बित्दै जाँदा धेरैजसो राजाहरू परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भए र तिनीहरूका प्रजाले पनि ती राजाहरूको खराब उदाहरण अनुकरण गरे। इस्राएलीहरू अनाज्ञाकारी भएकोले परमेश्वरले ईसापूर्व ६०७ मा तिनीहरूलाई बेबिलोनीहरूको कब्जामा पर्न दिनुभयो। त्यस समयदेखि यरूशलेममा कुनै पनि राजाले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरेनन्‌। यस अर्थमा परमेश्वरको शासन रोकियो भन्न सकिन्छ। तपाईंले अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको कुरा त बुझ्दै हुनुहुन्छ?
प्रकाश: हजुर, बुझ्दै छु।
गगन: त्यसैले ईसापूर्व ६०७ मा सात काल अर्थात्‌ परमेश्वरको शासन रोकिने समय सुरु भयो। सात कालको अन्तमा परमेश्वरले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना शासक पृथ्वीमा नभई स्वर्गमा नियुक्त गर्नुहुने थियो। अनि हामीले दानियलको किताबमा पढेका अरू भविष्यवाणीहरू पनि त्यसबेला नै पूरा हुने थिए। त्यसोभए सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिं यो हो: सात काल कहिले सकियो त? हामीले यसको जवाफ भेट्टाउन सक्यौं भने परमेश्वरको राज्यले कहिलेदेखि शासन गर्न थाल्यो भनेर थाह पाउन सक्छौं।
प्रकाश: ए .. बुझें। म भनूँ? सात काल सन्‌ १९१४ मा अन्त भयो।
गगन: एकदम ठीक! तपाईंले बुझ्नुभएछ।
प्रकाश: तर सात काल त्यही मितिमा अन्त हुन्छ भनेर चाहिं कसरी थाह हुन्छ त?
गगन: येशूले पृथ्वीमा सेवा गर्नु हुँदा सात काल त्यसबेलासम्म पनि अन्त भएको थिएन भनेर बताउनुभयो। * त्यसैले सात काल धेरै लामो समय हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। येशू पृथ्वीमा आउनुभन्दा सयौं वर्ष अघि सात काल सुरु भएको थियो र उहाँ स्वर्ग फर्कनुहुँदा पनि अन्त भएको थिएन। याद गर्नुहोस्, दानियलको भविष्यवाणीको अर्थ ‘अन्तको समयमा’ मात्र स्पष्ट हुने थियो। * चाख लाग्दो कुरा के हो भने १९ औं शताब्दीको अन्ततिर बाइबलका केही निष्कपट विद्यार्थीहरूले दानियलको किताबका भविष्यवाणीहरूका साथै अरू भविष्यवाणीहरू पनि जाँच्न थाले। तिनीहरूले सात काल सन्‌ १९१४ मा अन्त हुन्छ भनेर बुझे। सन्‌ १९१४ देखि संसारमा भएका ठूलठूला घटनाहरूले पनि परमेश्वरको राज्यले त्यस वर्षदेखि नै स्वर्गमा शासन गर्न थाल्यो भनेर देखाउँछ। यही वर्षदेखि यस संसारको अन्तको दिन पनि सुरु भयो। मलाई थाह छ, तपाईंलाई यी सबै जानकारी एकैचोटि बुझ्न गाह्रो हुन्छ।
प्रकाश: हो। यो सबै कुरा राम्ररी बुझ्न मैले यी जानकारीहरूलाई फेरि पढ्नुपर्छ।
गगन: चिन्ता गर्नु पर्दैन। मलाई पनि यी भविष्यवाणीहरू र यसका पूर्तिहरूबारे बुझ्न केही समय लागेको थियो। तर मलाई आशा छ आजको हाम्रो छलफलले तपाईंलाई परमेश्वरको राज्यबारे यहोवाका साक्षीहरूको विश्वास बाइबलआधारित छ भनेर बुझ्न मदत गऱ्यो होला।
प्रकाश: त्यो त हो। तपाईंहरूले सधैं बाइबलमै आधारित कुराहरूमा मात्र विश्वास गर्नुभएको देखेर म छक्क पर्छु।
गगन: तपाईंसित पनि त्यसै गर्ने इच्छा छ जस्तो देखिन्छ। अघि भनेजस्तै एकैचोटि थुप्रै नयाँ कुरा बुझ्न त गाह्रो हुन्छ। तपाईंसित पनि सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू अझै छ होला। जस्तै, हामीले सात काल परमेश्वरको राज्यसित सम्बन्धित छ र यो समय ईसापूर्व ६०७ मा सुरु भयो भनेर त बुझ्यौं। तर सात काल ठ्याक्कै सन्‌ १९१४ मा अन्त भयो भनेर चाहिं कसरी भन्न सकिन्छ त? *
प्रकाश: हो, म पनि त्यही कुरा सोच्दै छु।
गगन: सात काल कति लामो समय हो भनेर पत्ता लगाउन बाइबलले नै मदत गर्छ। म अर्को पटक आउँदा त्यस विषयमा सँगै विचार गरौं न, हुन्न? *
प्रकाश: हुन्छ, भइहाल्छ नि।
तपाईंले अझ धेरै बुझ्न चाहनुभएको बाइबलको कुनै विषय छ कि? यहोवाका साक्षीहरूले विश्वास गर्ने कुनै कुरा अथवा तिनीहरूको क्रियाकलापबारे बुझ्न तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ कि? त्यसो हो भने कुनै एक जना यहोवाका साक्षीसित नहिचकिचाइ सोध्नुहोस्। तिनीहरू यस्ता विषयहरूमा तपाईंसित छलफल गर्न खुसी हुनेछन्‌।
^ अनु.5निश्शुल्क बाइबल अध्ययन कार्यक्रममार्फत यहोवाका साक्षीहरू मानिसहरूसित व्यवस्थित रूपमा बाइबलबारे छलफल गर्छन्‌।
^ अनु. 11 हितोपदेश २:३-५.
^ अनु. 21 थप जानकारीको लागि यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ९ हेर्नुहोस्।
^ अनु. 27 दानियल ४:१३-१७.
^ अनु. 29 दानियल ४:२०-३६.
^ अनु. 57 १ इतिहास २९:२३.
^ अनु. 63 अन्तको दिनबारे भविष्यवाणी गर्दा येशूले यसो भन्नुभएको थियो: “राष्ट्रहरूलाई दिइएको समय पूरा नभएसम्म ती राष्ट्रहरूले यरूशलेमलाई [जसले परमेश्वरको शासनको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो] कुल्चीमिल्ची गर्नेछन्‌।” (लूका २१:२४) यस पदबाट हामी परमेश्वरको शासन रोकिने समय येशूको समयमा पनि चलिरहेको थियो र त्यो समय अन्तको दिन सुरु भएपछि मात्र सिद्धिने थियो भनी बुझ्न सक्छौं।
^ अनु. 63 दानियल १२:९
^ अनु. 67 बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको “सन्‌ १९१४—बाइबल भविष्यवाणीमा एउटा महत्त्वपूर्ण वर्ष” शीर्षकको अतिरिक्त लेख हेर्नुहोस्।
^ अनु. 69 यस पत्रिकाको अर्को अङ्कमा सात काल कति लामो समय हो भन्ने विषयमा बाइबलले के भनेको छ, त्यस विषयमा चर्चा गरिने छ।
परमेश्वरको राज्यले कहिलेदेखि शासन गर्न थाल्यो? (भाग २)
परमेश्वरको राज्यले कुन सालदेखि शासन गर्न थाल्यो भनेर बाइबलको भविष्यवाणी र परमेश्वरले बेबिलोनका राजालाई देखाउनुभएको सपनाले बताउँछ।
यहोवाका साक्षीहरूबारे अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू
मानिसहरूले अक्सर सोध्ने प्रश्‍नहरूको सरल जवाफ पाउनुहोस्‌।
आवरण लेख परमेश्वरको राज्यमा किन चासो लिनुपर्छ?
आवरण लेख परमेश्वरको राज्य​—येशूको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?
आवरण लेख परमेश्वरको राज्य​—यसले तपाईंलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ?
छिमेकीसित कुराकानी परमेश्वरको राज्यले कहिलेदेखि शासन गर्न थाल्यो? (भाग १)
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ म आफ्नै विषयमा मात्र सोच्ने गर्थें
किन प्रार्थना गर्ने? के ईश्‍वरले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा अक्टोबर २०१४ | परमेश्वरको राज्य—यसले तपाईंको लागि के गर्नेछ?
अक्टोबर २०१४ | परमेश्वरको राज्य—यसले तपाईंको लागि के गर्नेछ?
प्रहरीधरहरा अक्टोबर २०१४ | परमेश्वरको राज्य—यसले तपाईंको लागि के गर्नेछ?
दानिएलको भविष्यवाणीका विश्‍वशक्‍तिहरू